Football Khabar » ‘१०१ ग्रेटेस्ट फुटबलर’ को सूचीमा मेस्सी नम्बर १ मा : कसको स्थान कहाँ ?
‘१०१ ग्रेटेस्ट फुटबलर’ को सूचीमा मेस्सी नम्बर १ मा : कसको स्थान कहाँ ?
चर्चित फुटबल पत्रिका ‘४४२’ ले पछिल्ला २५ वर्षको अवधिका १०१ सर्वोत्कृष्ट फुटबल खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सो पत्रिकाले सो अवधिका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको सूची आज सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक सूचीमा स्पेनिस बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा परेका छन् । सन् २००४ देखि बार्सिलोनाबाट खेलिरहेका ३२ वर्षीय मेस्सीले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न नसके पनि उनी १०१ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको सूचीको पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएका हुन् ।
सो पत्रिकाले २५ वर्षको अवधिका खेलाडीको खेल जीवन, सफलता र विभिन्न तथ्यांकलाई आधार मानेर यस्तो सूची बनाएको हो ।
सूचीको दोस्रो नम्बरमा इटालियन युभेन्टस तथा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो छन् । चारपटक युरोपियन च्याम्पियन्स लिग तथा दुई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जितेका ३४ वर्षीय रोनाल्डो आफ्ना खास प्रतिस्पर्धी मेस्सीभन्दा पछि छन् ।
तेस्रो नम्बरमा फ्रेन्च खेलाडी जिनेदिन जिदान छन् । हाल स्पेनिस रियल मड्रिडका प्रमुख प्रशिक्षक रहेका जिदानले आफ्नो करिअरमा युरोपका ठूला उपाधिसँगै विश्वकपसमेत जितेका छन् ।
यस्तो टप–२० को सूची :
लिओनल मेस्सी (अर्जेन्टिना)
थिएरी हेनरी (फ्रान्स)
आन्द्रेस इनिएस्टा (स्पेन)
पाओलो माल्दानी (इटाली)
रोवेर्टो बागजियो (इटाली)
फाबियो कानभारो (इटाली)
रायन गिग्स (वेल्स)
वायने रुनी (इंग्ल्यान्ड)
लुइस फिगो (पोर्चुगल)
ग्याब्रिएल बाटिस्टुटा (अर्जेन्टिना)
इरिक क्यानटोना (फ्रान्स)
लुका मोड्रिक (क्रोएसिया)
सर्जियो बुस्केट्स (स्पेन)
प्रकाशित मिति १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १६:०४